Muuri News Network » Wakiilka Igad oo xalay u hoyday Baydhabo sidii loo dedejin lahaa dhismaha Baarlamaanka K/galbeed
Wakiilka Igad oo xalay u hoyday Baydhabo sidii loo dedejin lahaa dhismaha Baarlamaanka K/galbeed
Urur Goboleedka IGAD ayaa cadaadis ku saaraya maamulka Koonfur Galbeed inay dedejiyaan dhismaha Baarlamaanka maamulkaasi oo balantii ugu danbeysay ay ahayd in sabtidii la soo dhaafay ay ku dhawaaqaan.
Maxamed Cabdi Afey oo ah wakkiilka Urur Goboleedka IGAD oo xalay ku hoyday magaalada Baydhabo sababa la xiriira arimahaan ayaa la soo sheegayaa inuu wada hadalo hoose la leeyahay madaxda maamulkaasi si uu cadaadis ugu saaro Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed inay degdeg ugu dhawaaqaan magacyada xildhibanada maamulkaasi.
Afhayeenka Maamulka K/galbeed C/qaadir Nadaara ayaa warbaahinta u xaqiijiyay imaanshiyaha Maxamed Cabdi Afey inkastoo uu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo socdaalkiisa iyo hadii ay jiraan natiijo ka soo baxday.
Sidoo kale Afhayeenka muusan sheegin caqabada hortaagan in Xildhibaanada la soo magacaabo,xili sabtidii laga rabay inay kama danbeys ku dhawaaqaan.
Wararka madaxa banaan ee laga helayo baydhabo ayaa sheegaya in caqabada jirta ay tahay khilaafaadyo beelaha dhexdooda ah kuwaasoo qaarkood ku qanacsaneyn habka qeybsiga uu ku socdo.
Beelaha Qaar ayaa saacadihii ugu danbeeyay waxay baahiyeen in cadaalo daro ay tahay habka wax loo qeybsanayo islamarkaana beeshooda xaqooda la duudsiiyay.